Ny pejy fandokoana tantely dia misintona sy manonta maimaimpoana
Pejy fandokoana tantely | bibikely
Ahoana no anaovan'ny tantely tantely?
Ny tantely dia karazana bibikely mahasarika ny olona fa tsy mampatahotra azy ireo. Tsy ny tsiron'ny tantely ihany no matsiro, ny asan'ny tantely mandoto ny voninkazo mandoto ny fototry ny sakafo mahavelona eto an-tany.
Boky fandokoana tantely
Antony ampy ho an'ny sokajy misaraka amin'ny pejy fandokoana. Mirary fahafinaretana mikorisa amin'ny alàlan'ny pejy fandokoana ny tantely ho an'ny ankizy. Ny tsindry iray amin'ilay rohy dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny tantely pejy fandokoana:
Manangona vovobony ny tantely
Angony ny vovobony
Ny fanaovana tantely dia raharaha sarotra, farafaharatsiny rehefa tonga amin'ny taonan'ny tantely. Ny mpiasa vehivavy ihany, izay antsoina koa hoe tantely fananganana amin'izao fotoana izao, no ho eo manomboka amin'ny 14.-16. Andro tamin'ny fiainany dia nanao ny tantely tantely hexagonaly tsara vita tamin'ny tantely izy. Avy eo dia lasa tantely mpiambina eo amin'ny lavaka izy ireo ary avelany hanangona mamangy ho an'ny tantely malaza. Voalamina tsara amin'ny tantely tantely ny zava-drehetra.
Raha ny tena izy dia tapitra ny fiainana tantely toy izany rehefa afaka herinandro vitsivitsy. Izany no antony fohy dia fohy ny fotoana hanaovana tantely. Beeswax dia sarobidy tamin'ny Moyen Âge ary sarobidy tokoa ka ny fiangonana na olona ambony ihany no afaka mividy izany - na dia natao ho an'ny fanilo sy labozia aza!
Mba hahafahana manao tantely, dia tokony hampitombo ny fihenan-tsakafony ny tantely. Izany dia mitaky siramamy amin'ny habetsahana betsaka, izay mazava ho azy fa mandeha amin'ny famatsiana sakafon'ny biby. Tombanana fa ny renitantely dia tsy maintsy mihinana ny habetsaky ny moka mba hamokarana tantely iray kilao izay mety ho ampy ho an'ny tantely folo kilao.
Noho izany, ny famokarana tantely ataon'ny tantely dia atao amin'ny fotoana ilana famatsian-tsakafo lehibe dia ny aprily hatramin'ny jolay. Ny tantely dia vokarina ao amin'ny fihary ao amin'ny mizana afara ao an-kibo, izay misy renirano efatra amin'ny lafiny roa. Ireo fihary ireo dia mifandray amin'ny vatana matavy ao amin'ny renitantely, izay manome ny asidra lava-lava izay tena ilaina amin'ny famokarana tantely.
Ny takelaka vita amin'ny krystaly, marefo sy marefo izay noforonina toy izany, dia nalain'ny vavam-bavan'ireo tantely sy novonoina. Ny roran'ny tantely dia mahatonga azy io ho malefaka sy haorina.
Mahaliana: takelaka iray tapitrisa mahery no takiana amin'ny savoka iray kilao. Ankoatr'izay dia miankina amin'ny vovobony ny lokon'ny savoka!
Ny tsindry amin'ny sary dia manokatra ny galeri-tsary:
Tantely pejy fandokoana | Bibikely bibikely
Tantely pejy fandokoana | tantely
Mpandinika tantely pejy fandokoana tantely miaraka amin'ny tantely
Tantely pejy fandokoana - tantely
Toho-tantely pejy fandokoana - tantely
Dragonflies - boky fandokoana bibikely
Boky fandokoana bibikely
Pejy fandokoana bumblebee | bibikely